सावधान ! तपाईंलाई सामान्य लाग्ने यी बानीले सार्न सक्छ कोरोना – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/सावधान ! तपाईंलाई सामान्य लाग्ने यी बानीले सार्न सक्छ कोरोना
विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपालमा भाइरसको उच्च खतरासँगै त्रास पनि बढ्दो रहेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य संघसंस्थाहरूले विभिन्न सावधानी अपनाउन आह्वान गर्दै आएका छन् ।
आँखा तथा मुखको माध्यमबाट भाइरसहरू सहजै शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
एक अध्ययनका अनुसार मानिसले एक घन्टामा करिब १६ पटकभन्दा बढी आफ्नो अनुहारमा छुन्छ । कसैको त बानीनै हुन्छ कि पटक पटक नाक, आँखा तथा मुख छुने ।